UNkulunkulu unguNkulunkulu wabo bonke abantu. Akazenzi owezwe elithile noma owamazwe athile, futhi wenza umsebenzi wesu lakhe angavinjelwe yinoma ikuphi ukwakheka, izwe noma isizwe. Mhlawumbe awukaze ucabange ngale ndlela noma mhlawumbe uyiphikile, noma mhlawumbe izwe noma amazwe lapho kubonakala khona uNkulunkulu liyabandlululwa futhi ngelilodwa kulawo angathuthukile emhlabeni. Yize kunjalo uNkulunkulu unobuhlakani bakhe. Ngamandla Akhe kanye neqiniso Lakhe kanye nohlelo lakhe uthole iqembu labantu abanomqondo owodwa Naye. Futhi uzuze iqembu labantu afune ukulenza: iqembu elinqotshwe Nguye, elibekezelele izivivinyo ezibuhlungu kanye nezijeziso ezahlukahlukene futhi elingamlandela kuze kube sekugcineni. Injongo yokubonakala kukaNkulunkulu ngaphandle komngcele wendlela ethile noma izwe ukuthi akwazi ukuqeda umsebenzi wesu Lakhe. Isibonelo, uma uNkulunkulu aphenduka waba yinyama eJudiya, injongo Yakhe kwakukwenza umsebenzi wokuqothula ukuze ahlenge isintu. Kodwa amaJuda ayekholelwa ukuthi ngeke ayenze leyo nto uNkulunkulu, futhi acabanga ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu angaba yinyama abe nguJuda iNkosi uJesu. “Okungenakwenzeka” kwabo kwaba isisekelo sokuthi bajezise futhi baphikisane noNkulunkulu, futhi ekugcineni kwaholela ekumoshakaleni kwe-Israyeli. Namuhla, abantu abaningi benze iphutha elifanayo. Bafuna ukwamukela ukubonakala kukaNkulunkulu, kodwa futhi bajezisa ukubonakala kwakhe; “okungenakwenzeka” kwabo futhi kubamba ukubonakala kukaNkulunkulu emikhawulweni yemicabango yabo. Futhi ngibone abantu abaningi behleka bewa abawahleka usulu amazwi kaNkulunkulu. Ingabe lokhu kuhleka akuhlukile yini ekujeziseni kanye nokuthukana kwamaJuda? Awuhlukanga ekuqondaneni neqiniso, futhi uyalifuna iqiniso. Ufunda njengempumputhe futhi awuzinaki izinto. Uzozuzani ngokufunda kanye nokulinda kanje? Ungazithola yini iziqondiso zikaNkulunkulu? Uma ungakwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu, ufaneleka kanjani ukuba ngufakazi ekuzibonakaliseni kukaNkulunkulu? Lapho uNkulunkulu azibonakalisa khona, kunobuqiniso, futhi kunezwi likaNkulunkulu. Yilabo kuphela abangamukela iqiniso abangezwa izwi likaNkulunkulu, futhi yilabo bantu kuphela abafanelekile ukuba ngofakazi ekuzibonakaliseni kukaNkulunkulu. Bekela imicabango yakho eceleni! Yima ufunde la mazwi. Uma ulangazelela iqiniso, uNkulunkulu uzokukhanyisela ukuthi uqonde intando Yakhe kanye namazwi Akhe. Bekela eceleni “okungenakwenzeka” kwakho! Uma abantu becabanga ukuthi into ngeke yenzeke, yilapho ingenzeka khona, ngoba ubuhlakani bukaNkulunkulu bukhulu budlula amazulu, mikhulu imicabango kaNkulunkulu idlula eyomuntu, futhi umsebenzi kaNkulunkulu weqa umngcele womcabango womuntu. Kaningi uma into ingenakwenzeka, yilapho kumele kufunwe iqiniso, uma into yedlula umcabango nomqondo womuntu, yilapho iqukethe intando kaNkulunkulu. Ngoba noma yikuphi lapho uNkulunkulu ezibonakalisa khona, uNkulunkulu esenguNkulunkulu, futhi ubungako bakhe ngeke bushitshe ngenxa yendawo kanye nendlela azibonakalisa ngayo. Isimo sikaNkulunkulu asishintshi, kungakhathaliseki ukuthi imikhondo zakhe zikuphi. Noma ngabe imikhondo kaNkulunkulu ikuphi, unguNkulunkulu wawo wonke umuntu. Isibonelo iNkosi uJesu akusiyena uNkulunkulu wabakwa-Israyeli kodwa unguNkulunkulu wabo bonke abantu e-Asia, eYurophu kanye naseMelika. Futhi ukudlula lokho nguyena Nkulunkulu kuphela emhlabeni wonke. Ngakho masifuneni intando kaNkulunkulu futhi sambulelwe ukuzibonakalisa Kwakhe ezwini Lakhe, futhi silandele imikhondo yakhe! UNkulunkulu uyiqiniso, indlela, kanye nokuphila. Amagama Akhe kanye nokuzibonakalisa Kwakhe kuyahambisana, futhi ukuhlela Kwakhe kanye nezinyawo Zakhe kuyohlala kutholakala kubantu. Bafowethu nodadewethu, ngiyethemba ukuthi niyabona ukuzibonakalisa kukaNkulunkulu kulawa mazwi, futhi nizoqala ukulandela imikhondo zakhe esikhathini esisha, futhi nasezulwini elihle elisha kanye nasemhlabeni omusha olungiselelwe labo abamele ukuzibonakalisa kukaNkulunkulu.
Amavidiyo Okungabhekiswa Kuwo:
Imigomo yokusebenzisa Ubumfihlo Cookies
Copyright © 2020 IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO All rights reserved.
Uyalangazelela ukuba ufakazi wokubonakaliswa kukaNkulunkulu kanye nokulandela izinyathelo zikaNkulunkulu?
Sithinte nge-Whatsapp Xhumana Nathi